သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းနေတဲ့သူတွေ ဘာအစားအစာတွေ
Dr. Thin Yadanar @ Frances မှ ရေးသားသည်။ မနေ့က တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ ဟော်မုန်းအားလုံးရဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်က သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတဲ့။ ဒီတော့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းသွားဖြစ်ဖြစ် များနေရင်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ် သက်ရောက်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကတော့ အများကြီးပါ။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတယ်ဆိုတာ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကနေ ရှိသင့်တဲ့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေ အလုံအလောက်မထုတ်တဲ့ပြဿနာပါ။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းဆိုတာ လည်ပင်းအရှေ့အောက်ဘက်နားလောက်မှာရှိတဲ့ endocrine ဂလင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး larynx. အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ လိပ်ပြာပုံစံ ဂလင်းတစ်ခုပါ။ သူကနေ ကိုယ်တွင်းဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်ပေးပြီး ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နေတာပါ။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးထဲမှာတော့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းနေတဲ့ ဆိုတာဘာလဲ ဘယ်လို ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိလဲဆိုတာနဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေ ရှောင်ရမယ့် ဆေးတွေ စားစရာတွေ အကြောင်းပြောပြပေးတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းတဲ့ပြဿနာ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ ။ ။
• သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း အရမ်းများတဲ့အတွက် radioactive iodine ကုသမှု ခံယူထားရတဲ့သူတွေ
• သိုင်းရွိုက်ဂလင်းတစ်ခုလုံးကို ထုတ်ထားရတဲ့သူတွေ
• သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းစေတဲ့ အစားအသောက်တွေ ဆေးတွေ သောက်နေရတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းတဲ့ ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရှောင်သင့်တဲ့ အစားအစာများ ။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းနေတဲ့ သူတစ်ယောက်အဖို့ သူရှောင်သင့်တဲ့အစားအသောက်တွေရှိပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေကို ရှောင်ပါမှ အားနည်းနေတဲ့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းကို ပြန်အားဖြည့်ရာရောက်သလို နည်းနေတဲ့သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေ ပိုအားနည်းသွားတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင်ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုတ်
နောက်ပြီး ပဲပိစပ်ကနေထုတ်တဲ့ ပဲနို့၊ ပဲပိစပ်ဆီ ပဲငံပြာရည်စတာတွေကိုလည်းရှောင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
သိုင်းရွိုက်များတဲ့သူတွေသာမက သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းတဲ့သူတွေပါ ရှောင်သင့်တဲ့ အစားအစာတွေကတော့ ကေ်ာဖီ လက်ဘက်ရည် ၊ အရက်နဲ့ ဆေးရွက်ကြီးတွေ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီ လက်ဘက်ရည်မှာပါတဲ့ ကဖင်းဓာတ်က သိုင်းရွိုက်ဂလင်းကိုသက်ရောက်မှု ရှိတာကြောင့် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းနေတဲ့သူတွေ အတွက် သတိထားစရာပါပဲ။ နောက်ပြီး ဆေးရွက်ကြီးတွေမှာပါတဲ့ နီကိုတင်းဓာတ်ကြောင့်လည်း သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းတွေ ကမောက်ကမဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အဲဒါတွေကို ရှောင်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။
ရှောင်ရမယ့် ဆေးတွေ ။ ။
ကိုယ့်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းက ပုံမှန် မဟုတ်တာကြောင့် အခြားသူတွေလို ဆေးတွေ ဝယ်သောက်လိုက်တာမျိုး လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဆေးသောက်ခါနီးတိုင်း ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့လိုသလို ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဆေးတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများတဲ့သူတွေကို ကုသတဲ့ antiပthyroid drugs ( သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဆန့်ကျင်ဆေး) တွေကတော့ hypothyroidism ( သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းသူ) တွေ သတိထားရှောင်ရမယ့်ဆေးပါ။
• သူတို့တွေကတော့ radioactive iodine, methimazole and propylthiouracil တို့ဖြစ်ပြီး
• hypothyroidism ( သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းသူ)တွေ ရှောင်ရမယ့် အခြားဆေးတွေကတော့ lithium နဲ့ amiodrone တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းတဲ့သူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ရှောင်သင့်တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ ဆေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးတွေ သိထားတော့ ကိုယ်နဲ့မတည့်တာကဘာလဲ ဘာကိုရှောင်မလဲဆိုတာသိသွားလို့ ကုသမှု မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ပိုထိရောက်တာပေါ့ ။ ။
Accessed Date 30.11.2019
Hypothyroidism in Infants, Children, and Teens (ကလေးများတွင်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းခြင်း)
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနှင့် ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်ခြင်း ဆက်နွယ်မှု